Atody ao cocotte miaraka amin'ny ratatouille sy provolone - Thermomix Recipe | ThermoRecipes
Atody ao cocotte miaraka amin'ny ratatouille sy provolone
Verduras22 minitra290 kaloria
Ireo atody en cocotte misy ratatouille sy fromazy provolone dia a fomba fahandro haingana sy matsiro azonao atao amin'ny fotoana rehetra.
Izy ireo dia mety amin'ny fanomezana ny ratatouille izay navelanao tamin'ny resipeo hafa ary ao anatin'ny 25 minitra latsaka ho vonona ny hanompo eo ambony latabatra ianao.
Rehefa manandrana azy ireo ianao dia ho hitanao fa tena mamy ny konona ary mitambatra tanteraka amin'ny legioma sy fromazy.
1 Atody ao cocotte miaraka amin'ny ratatouille sy provolone
2 Te hahafantatra bebe kokoa momba ireo atody ireo amin'ny cocotte misy ratatouille sy fromazy provolone ianao?
Fampisehoana mahafinaritra miaraka amin'ny tsiro matsiro
Fotoana manontolo: 22M
150 g an'ny ratatouille namboarina (jereo ny fomba fahandro)
Fromazy provolone 50 g
Fenoy rano isika mandra-pahatongantsika ny marika voalohany, ny marika 1/2 litatra. Mafana izahay 5 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Mandritra izany fotoana izany dia mizara ramekin amin'ny ramekin 2, lovia na lasitra souffle kely isika.
Ampio ny fromazy provolone diced amin'ny ramekins ary apetaho eo amboniny fotsiny ny atody fotsy, ary avelao ho avy eo ny volombava.
Rehefa mafana ny rano dia apetrantsika ao amin'ny varoma ireo ramekins ary eo amin'ny toerany izy, ary azo antoka fa napetraka tsara ny sarony. Izahay dia manao fandaharana 15 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Rehefa tapitra ny fotoana dia manokatra tsara ny varoma isika ary mametraka ny iray amin'ireo voatavo voatokana ao anaty kaontenera tsirairay. Mandrakotra indray izahay ary manalava ny fandrahoana amin'ny alàlan'ny fandaharana 2 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Amin'ny faran'ny fotoana, dia manokatra indray izahay ary mitandrina mba tsy handoro ny tenantsika amin'ny etona ary, alohan'ny hanompoana dia mamafy oregano izahay.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ireo atody ireo amin'ny cocotte misy ratatouille sy fromazy provolone ianao?
Efa fantatrao fa ao amin'ny Thermorecetas dia maniry mafy izahay atody ao cocotte. Manome antsika kilalao maro izy ireo ary, ny marina dia a fomba am-boalohany fampisehoana an'ity singa ity. Azonao atao koa mitambatra amin'ny zavatra tsy tambo isaina.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ity fomba fahandro ity dia mety indrindra hanomezana ny ratatouille izay anananao ambiny avy amin'ny fomba fahandro hafa. Ary araraoty amin'izany amin'ny fomba fahandro matsiro izay hanompo anao hazakazaka maivana.
Efa fantatrao fa misy karazany maro pisto samihafa, azonao atao ve ilay tianao indrindra satria samy mandeha tsara miaraka amin'ny anana rehetra ny provolone sy ny atody.
Azonao atao koa ny manararaotra an'ity fomba fahandro ity fandrahoan-tsakafo ambaratonga ary ataovy ao anaty varoma ny atody cocotte raha mahandro zavatra hafa ao anaty vera ianao.
Azonao atao ny manararaotra manomana a crème na lasopy hanompo anao ho làlana voalohany. Ary hanana izany ianao fisakafoanana 10 ao anatin'ny fotoana fohy.
Tsy manoro hevitra anao aho mba hanao an'ity fomba fahandro ity mialoha tsara kokoa ny maka azy vaovao. Amin'izany no hankafizanao fatratra amin'ny alàlan'ny volon'ondry yolk, ny fromazy natsonika ary ny legioma feno tsiro.
Fanazavana fanampiny - Atody Cocotte misy holatra, bacon ary Gruyer / Atody Cocotte misy asparagus sy Gruyer / Emperora miaraka amin'i ratatouille / Ratatouille na aubergine sy zucchini ratatouille
Loharano - Namboarina sy namboarina ho an'ny Thermomix® ny resipeo avy amin'ny bilaogy Directo al paladar
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, atody, 3 taona mahery, Resaka varoma
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » atody » Atody ao cocotte miaraka amin'ny ratatouille sy provolone